ALOGEAR - Quanzhou Omi n'uwe Co., Ltd.
Ngwakọta mara mma nke na-adịgide adịgide, naịlọn dị nfe na ịgbatị, na-atọ ụtọ spandex na-eme ka leggings ndị a bụrụ ụwa kachasị mma. Ha na-enwe mmetụta dị nro ma dị mma dị ka owu maka uwe na-enweghị isi ma na-ebepụ ọsụsọ maka ịrụ ọrụ. … Leggings Nylon-spandex are the way to go.
Naịlọn Spandex bụ nkewa dịka eriri elastomeric ma ọ bụ naanị eriri ma ọ bụ ihe nwere ike ịgbasa karịa 500% na-enweghị agbaji. Ihe omuma ohuru nke uzo a bu ihe eji eme ya bu ikike ya iji nwetaghachi nha ya mgbe eji ya. Nylon Spandex bụ ezigbo ihe na-anọchi roba na uwe ebe ọ nwere nnukwu elasticity nke nwere ike ịlaghachi n'ụdị ya. Uwe ndị si na Nylon Spandex mee ka ọ dị mma, ọ bụ ezie na ha siri ike. Ngwunye Nylon Spandex dị oke nfe ma e jiri ya tụnyere roba nkịtị nke dị mfe na akpụkpọ ahụ.
Nylon Spandex, ihe eserese nke na-agbasawanye, bido na-amalite iji dị ka uwe kachasị mma nke ndị dike dị ka Superman na Batman, mana n'oge na-adịghị anya ndị egwuregwu nke ụwa nke oge a nabatara ya. Ndị na-egwu mmiri, ndị na-eme egwuregwu mmega ahụ, na ndị na-ese ihe osise na-eyi naịlọn Spandex mmetụta dị egwu. Ọbụnadị ndị na-eme egwuregwu na ndị na-egwu mmiri, ndị na-eme egwuregwu anyị na-eyikwa uwe Nylon Spandex n'ọhịa.
Ọbụna n'egwuregwu egwuregwu, akwa Naịlọn Spandex nwere ọtụtụ uru maka ebumnuche ọzọ. Ewezuga ikike ya iji nwetaghachi ọdịdị mbụ ya mgbe anaghị eji ya na ụdị ya, Nylon Spandex bụ ezigbo akwa akwa. Ọ dị fechaa ma dị nro yana na-eguzogide ọgwụ mmanụ ma ọ bụ na-agba mmiri. Ọ bụkwa abrasion na-eguzogide ọgwụ, ikpo, na akwa na-enweghị akwa.
Nylon Spandex abịawo ma pụọ ​​na ejiji n'ọtụtụ afọ n'ụdị dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, jeans Naịlọn Spandex bụ ihe ama ama na 1980. Nylon Spandex bụ ihe a họọrọ maka uwe egwuregwu kemgbe ọ chọpụtara. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime isi ojiji nke Nylon Spandex.
Naịlọn Spandex na-ejikarị ya eji ejiji ejiji. Uwe ime ahụ, eriri bra, sọks na-ahọrọ nke ihe onwunwe Nylon Spandex. Egwuregwu ndị ọzọ dị ka obere okirikiri, uwe mgba, Netball na uwe volleyball na-ahọrọ karịa nke akwa Nylon Spandex. Ihe ndị ọzọ a kwadebere site na Nylon Spandex gụnyere akwa mmiri, uwe aka, diapers, njigide njigide na akwa Zentai, eriri, eriri ịwa ahụ na Rowing unisuits.
Nylon Spandex bụ ezigbo akụkọ akụkọ sayensị. Akwụkwọ na-atọ ọchị Characters na-niile yiyi naịlọn Spandex ekike. Echere na Nylon Spandex ka ọ bụrụ ihe ga - eme n'ọdịnihu, yabụ akụkọ niile na ihe ọchị na - egosi ihe odide ha na uwe Nylon Spandex.
Mgbanwe na ike nke akwa a pụtara na enwere ike iji ya maka ebumnuche dị iche iche. Tsdị mmega ahụ bụ otu n'ime ngwa ndị a na-ahụkarị maka akwa a n'ihi na ha na-ekwe ka ahụ kuru ume, mọzụlụ na-agbasa ma na-agbatị n'oge mmega ahụ. Ihe ọzọ kpatara ya bụ na, ọ na-ahapụ gị ka ị hụ ahụ ike n'oge mgbatị ahụ ma hụ ya n'anya.
Mgbe ị na-ahọrọ uwe elu Nylon Spandex, enwere ihe ole na ole ịchọrọ iburu n'uche. Nke mbụ bụ ihe mere mmadụ ji eji akwa ahụ. Ka e were ya, ọ bụrụ na ị na-achọ uwe na-agba ọsọ, mgbe ahụ ịkwesịrị ikpebi n'etiti uwe mara mma na nke dabara adaba. Ndị na-eji skintight zuru oke maka ụbọchị oyi na obere oge ka ha na-eme ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ụdị dịgasị iche iche dị mma maka ụbọchị anwụ na-acha.